Wararka - Noocyada iyo waxqabadka dhalooyinka quraaradaha ah
Dhalooyinka quraaradaha waxaa badanaa loo isticmaalaa baakadaha alaabada ku jirta cuntada, khamriga, cabitaanka, dawooyinka iyo warshadaha kale. Dhalooyinka quraaradaha ah iyo gasacadaha waxay leeyihiin xasilooni kiimikaad oo wanaagsan mana faafayaan gudaha. Amni kuma jiraan in la isticmaalo sababo la xiriira ciriiriga hawada iyo u adkeysiga heerkulka sare. lagu kalsoonaan karo. Dhalada dhalada ah weelka baakadaha cabitaanka ee wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu raaco oo leh taariikh dheer. Iyada oo ay jiraan alaabooyin badan oo baakidh ah oo ku soo qulqulaya suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa wali ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakaddeeda ee aaladaha kale ee wax lagu rido aanay beddeli karin.
Sannadihii ugu dambeeyay, baahida gudaha ee dhalooyinka quraaradaha iyo gasacadaha ayaa sii kordheysay, laakiin shuruudaha tayada wax soo saarka (Astaamaha) iyo tirada (Tayada) sidoo kale wey sii kordheen. Waxaan hagaajinay qaab dhismeedka dhalooyinka quraaradaha iyo gasacadaha si aan ula jaanqaadno kaladuwan Waxyaabaha kala duwan ee la soo baakadeeyay, darajada wax soo saarka iyo qiimaha lagu daray ayaa la hagaajiyay, saamiga suuqa ayaa la balaariyay, iyo tartanka warshadaha dhalada dhalada ee wadankeyga ee suuqa oo dhan ayaa leh. waa la hagaajiyay.
Waxaa jira noocyo badan oo dhalooyin quraarad ah iyo gasacado, oo loo kala saaray qaab wareegsan, oval ah, afargeesle ah, afargeesle ah, iyo fidsan qaababka ay u eg yihiin. Dhexdooda, badidoodu waa wareegsan yihiin. Marka loo eego cabirka afka dhalada, waxaa jira af balaaran, af yar oo afka lagu buufiyo, iwm. Marka loo eego kala soocida midabka, waxaa jira midab aan midab lahayn iyo midab. Kala soocida kor ku xusan ma ahan mid adag. Mararka qaarkood dhalada isku nooc ah ayaa badanaa loo kala saari karaa dhowr nooc, iyadoo la eegayo horumarka shaqada iyo isticmaalka dhalooyinka iyo gasacadaha, noocyada kala duwani way sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa.
Baakadaha dhalooyinka dhalada ah waxay si dhow ula xiriirtaa dhalooyinka dhalada ah. Guud ahaan waxaa jira laba nooc oo baakado loogu talagalay dhalooyinka galaaska dawada ah. Mid waa baakadaha caadiga ah ee kartoonnada jiingadda ah, tan kalena waa kuleyl iyadoo la isticmaalayo filimka PVC ama PE. Yaree baakadaha, iyo qaddar yar oo baakadaha santuuqa ah. Dhalada dhalada ah weelka baakadaha cabitaanka ee wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu raaco oo leh taariikh dheer. Iyada oo ay jiraan alaabooyin badan oo baakidh ah oo ku soo qulqulaya suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa wali ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakaddeeda ee aaladaha kale ee wax lagu rido aanay beddeli karin. Marka laga eego dhinaca ilaalinta sheyga iyo shuruudaha nadaafadda, tayada baakadaha hoos u dhaca iyo baakadaha santuuqa ayaa aad uga sarreeya baakadaha baakadaha caadiga ah. Hadda waxay isu beddeshay filim PE ah oo kuleylka yareeya oo lagu rido kartoon, kaas oo nadiif ah oo nadiif ah, loona soo qaadan karo inuu yahay mid nadiif ah (fungus). Tani sidoo kale waa jihada horumarka mustaqbalka ee dhalooyinka dhalada caafimaadka.
Shuruudaha adag ee ilaalinta deegaanka waxay ka dhigeysaa cadaadiska dhalooyinka dhalada mid aad u sareeya. Dhalooyinka, dhalooyinka khibrada u leh soosaarida dhalada, iyo wax soo saarka dhalooyinka waxay khibrad u leeyihiin nashqadeynta iyo iibinta dhalooyinka quraaradaha kala duwan (Iibka) Sababtoo ah dhalooyinka quraaradaha iyo gasacadaha waa kuwo hufan oo kiimiko degan (Faahfaahin: xasiloon oo xasilloon; Isbedel maleh) Waxqabadka wanaagsan, qiimaha hooseeya , Muuqaal qurux badan, si fudud loo soo saaro waxsoosaarka (Soo saar), dib ayaa loo isticmaali karaa dhowr jeer, iwm, sidaas oo ay tahay inkasta oo ay ku tartamayaan qalabka kale ee baakadaha (tartanka), soo saarayaasha dhalada dhalada ayaa wali leh faa iidooyin kale Astaamaha qalabka baakadaha uusan beddeli karin. Dhalada dhalada ah weelka baakadaha cabitaanka ee wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu raaco oo leh taariikh dheer. Iyada oo ay jiraan alaabooyin badan oo baakidh ah oo ku soo qulqulaya suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa wali ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakaddeeda ee aaladaha kale ee wax lagu rido aanay beddeli karin.
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo ay sii kordheyso baahida macaamiisha ee qotada dheer ee wax soo saarka baakadaha dhalada ah (Wax soo saar), daabacaadda shaashadda xariirta iyo ubaxyada dubista dusha weelka dhalooyinka ayaa noqotay wax caadi ah, iyo shuruudaha tayada iyo ilaalinta deegaanka ee daabacaadda xariirta. suufka daabacaadda suufka iyo rinjiyeyaasha gudaha iyo dibaddaba Sii kordheysa oo adag, cadaadis badan saara shirkado badan oo dhalada dhalada galaaska ka sameeya.
Buddhism-ka waxaa laga keenay Shiinaha kana soo jeeday Han Dynasty, wuuna horumarey oo ku barwaaqoobey xilligii Wei iyo Jin Dynasties. Dahab, qalin, amber, shacaab, dhagax dhagax, dhaldhalaal midab leh, iyo agate ayaa lagu taxay Toddoba Qasnadaha Buddhism-ka. Intaas waxaa sii dheer, Cao Cao aabihiis iyo wiilkiisa waxay ku taliyeen aaska khafiifka ah, sida amarka dhimashada-Cao Cao, "isku soo dhowaada waqtiga, ma jiro khasnado dahab iyo jaad ah", sidaa darteed nidaamka jaadka aaska ee ka sameysnaa Boqortooyada Han wax ka badan 400 sano ayaa dhimatay, luulkii iyo waxyaabihii kale ee la soo saarayna sidoo kale si xun ayey u dhaceen. Dhalooyinka dhalada ah waxaa loo isticmaalay in lagu labisto waxyaalaha hadiyadaha Buddhist-ka ah, tiro aad u fara badan oo quraaraddo ah ayaa loo sameeyay si loogu qurxiyo astaamaha Buddha iyo macbudyo, taas oo ilaa xad si muuqata u muujineysa horumarka tikniyoolajiyadda xilligaas.